မင်းအောင်လှိုင်၏ လူသားမျက်နှာဖုံးစွပ် ကမ်ပိန်း နှင့် အရှေ့တောင် အာရှ နွေဦး တော်လှန်ရေးကြီး | CeleTrend
မင်းအောင်လှိုင်၏ လူသားမျက်နှာဖုံးစွပ် ကမ်ပိန်း နှင့် အရှေ့တောင် အာရှ နွေဦး တော်လှန်ရေးကြီး
February 17, 2021 by CeleTrend
တရုတ် သံအမတ်ကြီး က တရုတ် အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာပြည်၏ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ကြိုတင် သိရှိထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ယခုလို ဖြစ်လာနေသည်ကို မိမိတို့ မြင်တွေ့လိုခြင်း မရှိကြောင်း နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို အကူအညီပေးနေသည်မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ “ရယ်စရာ ကောင်း” သည့် စွပ်စွဲမှု များသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ ရဲ နှင့် စစ်တပ်များဖက်က လည်း အကြမ်းမဖက်ကြရန် အစရှိသဖြင့် မနေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ရှည်လျားစွာ ငြင်းဆိုသွားပြီး သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြရန် တိုက်တွန်းနေသော်လည်း ထိုနေ့မှာပင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ နှင့် သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်တို့ကို လျို့ဝှက်စွာ တရားစီရင်မှုမှာ စတင်ခဲ့လေပြီ ဖြစ်သည်။အစအဆုံး အချိန်တနာရီမျှပင် မကြာလိုက်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နောက်ထပ် တမှုတိုးလာခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း လူထု နှင့် ထိတွေ့ခဲ့သည် ဆိုသော စွပ်စွဲချက်ပင် ဖြစ်သည်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုယ်တိုင် သီတဂူနှင့် ပေါင်းကာ ကျောက်တုံးကြီးများစွာကို၊ အခမ်းအနားနှင့် အကြိမ်ကြိမ် သယ်ယူနေကြသည်ကို၊ မေ့လျော့သွားကြပြီ ဖြစ်သည်။ထိုသို့ ၎င်းတို့ စွပ်စွဲသည့် အမှုများမှာ ရယ်ဖွယ်ရာသာ ဖြစ်သော်လည်း ထိုသို့သော အမှု ဖြင့် တတိုင်းပြည်လုံးကို ထောင်ထဲ ထည့်လို့ ရသည်ဟူသော စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ခြိမ်းခြောက်လိုက်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ထိုသို့ မတရားမှုများ အနိုင်ကျင့်မှု များကြောင့် ၎င်းတို့ ရည်ရွယ်သလို ဖြစ်မလာပဲ ဆန့်ကျင့် မှုများသာ အားကောင်းသည်ထက် အားကောင်းလာနေရသည်။၎င်းတို့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတကြီးကို လူထု အာရုံမစိုက်စေရန် ထိုသို့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ပြုလုပ်လာကြသော်လည်း သတင်းရသည့် လူထုကြီးကား ဆူးလေဘုရားအနီးတွင် သိန်းချီပြီး စုရုံး ရောက်ရှိလာနေပြီ ဖြစ်သည်။သတိထားရမည့် အချက်မှာ မိမိတို့ လုပ်မည့်အရေးကို စောစီးစွာ သတင်း မထုတ်ပြန်မိစေရန်ပင် ဖြစ်သည်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီ မင်းအောင်လှိုင်သည် ယခုအခါ War of Attrition ဆိုကာ လူထုအနေနှင့်သူ့အလိုလို အားပျော့သွားစေရန် လူသားမျက်နှာဖုံး စွပ်ကာ စောင့်ကြည့်နေချိန် ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် သူထင်သလို ဖြစ်မလာ ဆိုသည်ကို သူနှင့် သူ့အား စောင့်ကြည့်နေသူများ သိအောင် ပြသရမည် ဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်တွင်လည်း ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဆိုသူ ဇော်မင်းထွန်းသည် လူသားမျက်နှာ ကမ်းပိန်း တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် အရပ်ဝတ် နှင့် ထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း “သူခိုးက လူပြန်ဟစ်သည့် ဇာတ်မျိုး” ခင်းကျင်း လာခဲ့သည်။ ယခုအခါ တနိုင်ငံလုံး အနှံ အင်အား ၇၅၀,၀၀၀ ခန့် ရှိ ဆရာဝန်များ၊ ဆရာဆရာမများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မီးရထား လုပ်သားများ၊ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ ဝန်ထမ်းများ၊ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ အစရှိသည့် ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံနှင့် အနုပညာရှင်တို့၏ အထွေထွေ သပိတ်တိုက်ပွဲကြီးကို “မျိုးချစ်စိတ် ကင်းမဲ့သည့် လုပ်ရပ်” ဟု ပြောဆိုလာခဲ့သည်။ဖေ့စ်ဘုတ်ကို တားမြစ်ထားမှုကို သတင်းမှားများ ဖြန့်ချီရာ ဖြစ်၍ ဟု ဆိုသည်။တကယ်တမ်း တွင် သတင်းမှားများ ဖြန့်ချီနေသူများသည် ၎င်းတို့သာ ဖြစ်သည်ကို ကာကယံရှင် ဖေ့စ်ဘုတ်က သိရှိပြီး ပိတ်ပင်လာသည်ကိုပင် ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်မရှက် ပြောဆိုလာပြန်သည်။ပြည်သူများကလည်း အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ live လွှင့်လာသည်ကို ရယ်စရာ အဖြစ် ဟဟ များ ပေးကာ တုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည့်အပြင် သတင်းမှားများ ဖြန့်ချီ နေသည်ဆိုကာ ရီပို့များ ဝိုင်းထုခဲ့ကြသည်ဟု နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာကြီးတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ကြသည်။လောလောဆယ်တွင် ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းများ လုံးဝရပ်တန့်သွားအောင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေသည့် ပြည်သူများက အန္တရာယ်ကို အရေးမထား နိုင်ပဲ ဗဟိုဘဏ် ရှေ့တွင် ရုံးမတက်အောင် ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ရထားလမ်းများ ကို ပိတ်ဆို့ပြစ်ခြင်း များ အထိ လုပ်လာရပြီ ဖြစ်သည်။ထိုသို့သော လုပ်ရပ်များကြောင့် သွေးစွန်းသွားမည်ဆိုလျှင် ထမင်းဘူးလေးကိုင်ကာ ရုံးလာတက်နေသူများ၊ အလုပ်ပြန်တက်ရန် ဆော်ဩသူများ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ယခုအခါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီ မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ၎င်း၏ အလိုတော်ရိများက ရွေးကောက်ပွဲတွင် မရှုမလှ ရှုံးနိမ့်သွားရသည်ကို ရှက်ရမ်းရမ်းကာ တိုင်းပြည်အား ချောက်ထဲသို့ တွန်းချလာနေသည့် တမျိုးသားလုံး ရင်ဆိုင်နေကြရသော အန္တရာယ်ကြီးကို တံမျက်စီးလှဲသူကအစ ဝန်ထမ်းအားလုံး CDM လှုပ်ရှားမှုကြီးတွင်သာ ပါဝင်လာမည်ဆိုလျှင် လုံးဝကျော်လွှားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။နိုင်ငံရေးကို တလုံးတပါဒမျှ စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိခဲ့သည့် လူငယ်လူရွယ်လေးများပင် မတရားမှုကို ရွံရှာ မုန်းတီးစိတ်၊ မိမိတို့ အနာဂတ် အရေး ကို စိုးရိမ်ပူပင်လာသော စိတ်များဖြင့် မိမိတို့ ပုခုံးပေါ် ကျရောက်လာ နေသည့် သမိုင်းပေးတာဝန်ကြီးအား ထမ်းဆောင်နေကြပြီ ဖြစ်သည် သတိမူမိရန်လိုသည်။မိဘများက မိမိတို့ တခဏတာ ကောင်းစားရေး သာ ကြည့်ပြီး သားသမီးများအား နင်တို့ လူကြီးဖြစ်လာလျှင် လည်း ကြည့်ကျက် ရုန်းကန်ကြပေတော့ ဆိုကာ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် မထားသင့်၊ ရေသာမခိုသင့်ပေ။စစ်အာဏာရှင်များ ရှင်သန်နေသရွေ့ မိမိတို့ သားသမီးများသည် ပုခွက်တွင်း မှ သင်္ချိုင်းရောက်သည်အထိ မငတ်ရုံတမည် မဝရေစာဖြင့် အသက်ရှင်သန် နေထိုင်ကြရတော့မည် ဆိုသည်ကို သဘောပေါက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ကြုံလည်း ကြုံခဲ့ကြရပြီး ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အဖြစ်များကို ခွင့်ပြုပေးနေသော စနစ်ကြီးသည် မှားယွင်းနေ၍သာ ဖြစ်မည်။ ထို့အတွက် ပြောင်းလဲသင့်သည်ဟု မယူဆသင့်ပေဘူးလော။ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိထားသင့်သည်မှာ အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် သွေးပျက်နေသော အခြေအနေတွင်ပင် ၎င်းတို့မှ တိုင်းပြည်ကို နိုင်နင်းစွာ အုပ်ချုပ် နိုင်ပြီဟု လူထုအား ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန် လူသားမျက်နှာဖုံး စွပ်ကာ လှည့်ဖျားနေဆဲ ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းတို့ အောင်မြင်သွားသည် ဆိုလျှင် ပင် တိုင်းပြည်သည် ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက် ဘဝနှင့် စခန်းသွားကြရပေတော့မည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ ငါးနှစ်တာ ကြိုးပမ်းခဲ့သော တည်ဆောက် ပြုပြင်ခဲ့မှုများ ရေစုံမျောပေတော့မည်၊ မင်းဘဏ္ဍာ ကိုယ့်ဟာမှတ်ကာ ခိုးဆိုး လုယက် အကျင့် ပျက်မှုများလည်း တစခန်း ထလာပေဦးမည်။ဤသည်တို့ကို ၎င်းတို့များ နိုင်သွားလျှင် ဆိုလျှင် ကြောင့်ကျ နေသူများ သဘောပေါက်ရန်လိုသည်။လက်ရှိ အနေအထားတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီ မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အဖွဲ့သည် တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသူများ ဟုတ်မဟုတ် အရင် မေးခွန်းထုတ်သင့်သည်။မဟုတ်ဟု ယူဆပါလျှက် ၎င်းတို့အား တနည်းမဟုတ် တနည်း ထောက်ခံနေမည်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်အပေါ် ကိုယ်ကျိုးအတွက် သစ္စာဖေါက်သူများ အဖြစ် စာရင်းဝင်ကြပေတော့မည်။၎င်းတို့ အဖို့က စစ်သားများကို လစာပေးနိုင်ရန် လုံးပမ်းနေရပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဂျင်းသတင်းများ ပလူပျံနေပြီ ဖြစ်သည်။သို့သော် ဂျင်းသတင်းများ ဆိုရာတွင်လည်း ပြည်သူများ စိတ်အားတက်စေမည်ထက် အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေမည့်၊ ဆန္ဒပြရာတွင် မပါဝင်ရဲအောင် ဖြစ်စေမည့်၊ ဖမ်းမယ် ဆီးမယ် သတ်မယ် ဖြတ်မယ် ဟူသော ဂျင်းသတင်းများက ပို၍ ပင် များပြားနေသည်။ထိုသတင်းများကို မဖြန့်ဖြူးကြပါရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုသည်၊ လိုအပ်လျှင် ခေါင်းဆောင်များက သတိပေးပါလိမ့်မည်၊ မိမိတို့ မစဉ်းစား မဆင်ခြင်ဘဲ ပြုမူနေမှုများသည် ဆန္ဒပြသူများ၏ စိတ်ဓါတ်ရေးရာကို လွန်စွာ ထိခိုက်အောင် ဖြစ်စေသည်ကို သတိမူကြပါ။ပြည်သူများက လူသား မျက်နှာဖုံးစွပ် များ၏ ကောက်ကျစ်မှု လှည့်ဖြားမှုများ၊ ဆိုက်ဝါးများ အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်သည်။(၂) လက်ရှိတွင် မြန်မာ စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်များက သမ္မတ ဘိုင်ဒင်ကို သူအာဏာရယူပြီး ဆယ်ရက် အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် နားရွက် တံတွေး ဆွတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ အရေး နှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားရေး ပြန်လည် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ထားသည်ကလွဲ၍ ထူးထူးခြားခြား လှုပ်ရှားမှု မတွေ့ရသေးပေ။ဘိုင်ဒင်သည် ယခု အချိန်အထိ အရှေ့အာရှ နှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မခန့်အပ် ရသေးသည့်အပြင် မြန်မာပြည်ရှိ အမေရိကန် သံအမတ်သည်လည်း ထရန့် လက်ထက် က ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပြီး တာဝန်ယူထားသည်မှာ နှစ်လ သက်တမ်းသာ ရှိနေပေသေးသည်။
လက်ရှိတွင် အမေရိကန်၏ USAID မှလည်း ၎င်းတို့ ပေးရန်ရှိသော ဒေါ်လာ သန်း (၄၀) ကို အဖွဲ့အစည်းတခုခုက အခိုင်အမာ တာဝန်ယူပြီး CDM ကို ကူညီရန် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေသည်ဟု သတင်းများ ရရှိနေသည်။ထိုကိစ္စအတွက် CRPH မှ အမေရိကန် နှင့် တရားဝင် ဆွေးနွေးဖို့ ပြင်ဆင်နေသည်ဟု ယူဆရသည်။အမေရိကန် နှင့် ဗြိတိန် တို့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စွဲဆိုထားချက်များကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။အမေရိကန် ရှိ ပါတီကြီး နှစ်ရပ်မှ အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဖိအား အမျိုးမျိုး ပေးသွားမည်ဟု ပြောဆိုနေကြပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံရေး အသိုက်အဝန်း မှ မြန်မာစစ်တပ်၏ အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်နေသော လုပ်ရပ်များ အတွက် စိတ်ကုန်လာကြပြီး မြောက်ကိုရီယား ပုံစံ ဆက်ဆံသွား ရမည်ဟု ပြောဆိုလာနေကြသည်။တရုတ် ပြီးလျှင် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ငွေရေးကြေးရေး အရ အသက်ဆက် နိုင်အောင် ကူညီနေသည့် စင်္ကာပူ နှင့် ဂျပန် အားလည်း သတိပေးလိုက်သည်။စင်္ကာပူ နှင့် ဂျပန်သည် ယခုအခါ သာမန် ပြည်သူများကို ထိခိုက်လာမည်၊ ဒက်ဒီကြမ်းလျှင် မာမီချော့မည် ဟူသော ဆောင်ပုဒ်အောက်တွင် ပုန်းကွယ်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။အင်ဒိုနီရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မှ မြန်မာတို့၏ အရေး အပေါ် မြုံစိစိ လုပ်နေသော အာဆီယံကို တက်ကြွစွာ ပါဝင်လာရေး လှုံ့ဆော်နိုင်ရန် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် ဘရူးနိုင်း သို့ ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ဩစတေးသျ၊ နှင့် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် အထူး သံတမန်များ နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေသည်ဟု သိရသည်။အင်ဒိုနီရှားသည် လက်ရှိ အာဆီယံ နိုင်ငံများထဲတွင် စစ်အာဏာ သိမ်းမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့သော တခုတည်းသော နိုင်ငံ အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ်သည်။အာဆီယံ နိုင်ငံများသည် မြန်မာပြည်တွင် ကြီးထွားလာနေသော မြို့ပြလူ့အဖွဲ့အစည်းများ ၏ လှုပ်ရှားမှုကြီးသည် ၎င်းတို့ထံ ကူးစက်မလာစေရန် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ဖြစ်လျှက်ရှိပြီး ထိုအထဲတွင် စင်္ကာပူက ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်နေသည်။စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာ ပြည်သူများ လုံးဝဆန္ဒမပြနိုင်ရန် နိုင်ငံတွင်းမှ နှင်ထုတ်မည် အစရှိသည့် အမျိုးမျိုး ခြိမ်းခြောက်သည့် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်နေသည်။၎င်းတို့ စိုးရိမ်မည် ဆိုလည်း စိုးရိမ်စရာပင်၊ ယခုပင် မြန်မာပြည်၏ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကို “အရှေ့တောင် အာရှ နွေဦး တော်လှန်ရေး ကြီး” ၏ အစဟု ကင်ပွန်းတပ် ရေးသားလာကြပြီ ဖြစ်သည်။အရေးတော် ပုံအောင်ရမည်!!!CRD_Sir Hla Soe Wai
တရုတျ သံအမတျကွီး က တရုတျ အစိုးရအနဖွေငျ့ မွနျမာပွညျ၏ စဈအာဏာသိမျးမှုကို ကွိုတငျ သိရှိထားခွငျး မရှိကွောငျး၊ ယခုလို ဖွဈလာနသေညျကို မိမိတို့ မွငျတှလေို့ခွငျးမရှိကွောငျးနှငျ့စဈခေါငျးဆောငျမြားကို အကူအညီပေးနသေညျမှာ မဟုတျကွောငျး၊ “ရယျစရာ ကောငျး” သညျ့ စှပျစှဲမှု မြားသာ ဖွဈကွောငျး၊ နိုငျငံရေး ပါတီမြား၊ ရဲ နှငျ့ စဈတပျမြားဖကျက လညျး အကွမျးမဖကျကွရနျ အစရှိသဖွငျ့ မနကေ့ ပွုလုပျသောသတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲတှငျ ရှညျလြားစှာ ငွငျးဆိုသှားပွီး သကျဆိုငျသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးကွရနျ တိုကျတှနျးနသေျောလညျး ထိုနမှေ့ာပငျ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ နှငျ့ သမ်မတကွီး ဦးဝငျးမွငျ့တို့ကိုလြို့ဝှကျစှာ တရားစီရငျမှုမှာ စတငျခဲ့လပွေီ ဖွဈသညျ။အစအဆုံး အခြိနျတနာရီမြှပငျ မကွာလိုကျဘဲ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို နောကျထပျ တမှုတိုးလာခဲ့သညျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈပှားနစေဉျအတှငျး လူထု နှငျ့ ထိတှခေဲ့သညျ ဆိုသောစှပျစှဲခကျြပငျ ဖွဈသညျ။ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျတို့ကိုယျတိုငျ သီတဂူနှငျ့ ပေါငျးကာ ကြောကျတုံးကွီးမြားစှာကို၊ အခမျးအနားနှငျ့ အကွိမျကွိမျ သယျယူနကွေသညျကို၊ မလြေ့ော့သှားကွပွီ ဖွဈသညျ။ထိုသို့ ၎င်းငျးတို့ စှပျစှဲသညျ့ အမှုမြားမှာ ရယျဖှယျရာသာ ဖွဈသျောလညျး ထိုသို့သော အမှု ဖွငျ့ တတိုငျးပွညျလုံးကို ထောငျထဲ ထညျ့လို့ ရသညျဟူသောစဈအာဏာရှငျတို့၏ ခွိမျးခွောကျလိုကျမှုလညျး ဖွဈသညျ။ထိုသို့ မတရားမှုမြား အနိုငျကငျြ့မှု မြားကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့ ရညျရှယျသလို ဖွဈမလာပဲ ဆနျ့ကငျြ့ မှုမြားသာ အားကောငျးသညျထကျ အားကောငျးလာနရေသညျ။၎င်းငျးတို့မှ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ သမ်မတကွီးကို လူထု အာရုံမစိုကျစရေနျ ထိုသို့ ခိုးကွောငျခိုးဝှကျ ပွုလုပျလာကွသျောလညျး သတငျးရသညျ့ လူထုကွီးကား ဆူးလဘေုရားအနီးတှငျ သိနျးခြီပွီး စုရုံး ရောကျရှိလာနပွေီ ဖွဈသညျ။သတိထားရမညျ့ အခကျြမှာ မိမိတို့ လုပျမညျ့အရေးကို စောစီးစှာ သတငျး မထုတျပွနျမိစရေနျပငျ ဖွဈသညျ။ဗိုလျခြုပျမှူးကွီ မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယခုအခါ War of Attrition ဆိုကာ လူထုအနနှေငျ့သူ့အလိုလို အားပြော့သှားစရေနျ လူသားမကျြနှာဖုံး စှပျကာ စောငျ့ကွညျ့နခြေိနျ ဖွဈသညျ။
ထို့အတှကျ သူထငျသလို ဖွဈမလာ ဆိုသညျကို သူနှငျ့ သူ့အား စောငျ့ကွညျ့နသေူမြား သိအောငျ ပွသရမညျ ဖွဈသညျ။ နပွေညျတျောတှငျလညျး ပွနျကွားရေး ဒုဝနျကွီး ဆိုသူ ဇျောမငျးထှနျးသညျ လူသားမကျြနှာ ကမျးပိနျး တစိတျတပိုငျး အဖွဈ အရပျဝတျ နှငျ့ ထှကျပျေါလာပွီး၎င်းငျးတို့၏ ထုံးစံအတိုငျး “သူခိုးက လူပွနျဟဈသညျ့ ဇာတျမြိုး” ခငျးကငျြး လာခဲ့သညျ။ ယခုအခါ တနိုငျငံလုံး အနှံ အငျအား ၇၅၀,၀၀၀ ခနျ့ ရှိ ဆရာဝနျမြား၊ ဆရာဆရာမမြား၊ ရုံးဝနျထမျးမြား၊ မီးရထား လုပျသားမြား၊ ဓါတျအားပေး စကျရုံ ဝနျထမျးမြား၊ပုဂ်ဂလိက ဘဏျဝနျထမျးမြား အစရှိသညျ့ ဝနျထမျးပေါငျးစုံနှငျ့ အနုပညာရှငျတို့၏ အထှထှေေ သပိတျတိုကျပှဲကွီးကို “မြိုးခဈြစိတျ ကငျးမဲ့သညျ့ လုပျရပျ” ဟု ပွောဆိုလာခဲ့သညျ။ဖစျေ့ဘုတျကို တားမွဈထားမှုကို သတငျးမှားမြား ဖွနျ့ခြီရာ ဖွဈ၍ ဟု ဆိုသညျ။တကယျတမျး တှငျ သတငျးမှားမြား ဖွနျ့ခြီနသေူမြားသညျ ၎င်းငျးတို့သာ ဖွဈသညျကို ကာကယံရှငျ ဖစျေ့ဘုတျက သိရှိပွီး ပိတျပငျလာသညျကိုပငျ ကိုယျ့သိက်ခာ ကိုယျမရှကျ ပွောဆိုလာပွနျသညျ။ပွညျသူမြားကလညျး အဆိုပါ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ live လှငျ့လာသညျကို ရယျစရာ အဖွဈ ဟဟ မြား ပေးကာ တုနျ့ပွနျခဲ့ကွသညျ့အပွငျ သတငျးမှားမြား ဖွနျ့ခြီ နသေညျဆိုကာ ရီပို့မြား ဝိုငျးထုခဲ့ကွသညျဟု နယူးယောကျတိုငျးမျ သတငျးစာကွီးတှငျ ဖျေါပွခဲ့ကွသညျ။လောလောဆယျတှငျ ၎င်းငျးတို့ လုပျငနျးမြား လုံးဝရပျတနျ့သှားအောငျ ကနျ့ကှကျ ဆန်ဒပွနသေညျ့ ပွညျသူမြားက အန်တရာယျကို အရေးမထား နိုငျပဲ ဗဟိုဘဏျ ရှတှေ့ငျ ရုံးမတကျအောငျ ပိတျဆို့ခွငျး၊ ရထားလမျးမြား ကို ပိတျဆို့ပွဈခွငျး မြား အထိ လုပျလာရပွီ ဖွဈသညျ။ထိုသို့သော လုပျရပျမြားကွောငျ့ သှေးစှနျးသှားမညျဆိုလြှငျ ထမငျးဘူးလေးကိုငျကာ ရုံးလာတကျနသေူမြား၊ အလုပျပွနျတကျရနျ ဆျောဩသူမြား၏ တာဝနျသာ ဖွဈပလေိမျ့မညျ။
ယခုအခါ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီ မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ ၎င်းငျး၏ အလိုတျောရိမြားက ရှေးကောကျပှဲတှငျ မရှုမလှ ရှုံးနိမျ့သှားရသညျကို ရှကျရမျးရမျးကာ တိုငျးပွညျအား ခြောကျထဲသို့ တှနျးခလြာနသေညျ့ တမြိုးသားလုံး ရငျဆိုငျနကွေရသော အန်တရာယျကွီးကို တံမကျြစီးလှဲသူကအစ ဝနျထမျးအားလုံး CDM လှုပျရှားမှုကွီးတှငျသာ ပါဝငျလာမညျဆိုလြှငျ လုံးဝကြျောလှားနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။နိုငျငံရေးကို တလုံးတပါဒမြှ စိတျဝငျစားခွငျး မရှိခဲ့သညျ့ လူငယျလူရှယျလေးမြားပငျ မတရားမှုကို ရှံရှာ မုနျးတီးစိတျ၊ မိမိတို့ အနာဂတျ အရေး ကို စိုးရိမျပူပငျလာသော စိတျမြားဖွငျ့ မိမိတို့ ပုခုံးပျေါ ကရြောကျလာ နသေညျ့ သမိုငျးပေးတာဝနျကွီးအား ထမျးဆောငျနကွေပွီ ဖွဈသညျ သတိမူမိရနျလိုသညျ။မိဘမြားက မိမိတို့ တခဏတာ ကောငျးစားရေး သာ ကွညျ့ပွီး သားသမီးမြားအား နငျတို့ လူကွီးဖွဈလာလြှငျ လညျး ကွညျ့ကကျြ ရုနျးကနျကွပတေော့ ဆိုကာ မကျြနှာလှဲ ခဲပဈ မထားသငျ့၊ ရသောမခိုသငျ့ပေ။စဈအာဏာရှငျမြား ရှငျသနျနသေရှေ့ မိမိတို့ သားသမီးမြားသညျ ပုခှကျတှငျး မှ သင်ျခြိုငျးရောကျသညျအထိမငတျရုံတမညျ မဝရစောဖွငျ့ အသကျရှငျသနျ နထေိုငျကွရတော့မညျ ဆိုသညျကို သဘောပေါကျကွရမညျ ဖွဈသညျ။ကွုံလညျး ကွုံခဲ့ကွရပွီး ပွီ ဖွဈသညျ။ ထိုသို့သော အဖွဈမြားကို ခှငျ့ပွုပေးနသေော စနဈကွီးသညျ မှားယှငျးနေ၍သာ ဖွဈမညျ။ ထို့အတှကျ ပွောငျးလဲသငျ့သညျဟု မယူဆသငျ့ပဘေူးလော။ကြှနျတျောတို့ အားလုံး သိထားသငျ့သညျမှာ အာဏာသိမျး အဖှဲ့သညျ သှေးပကျြနသေော အခွအေနတှေငျပငျ ၎င်းငျးတို့မှ တိုငျးပွညျကို နိုငျနငျးစှာ အုပျခြုပျ နိုငျပွီဟု လူထုအား ထငျယောငျထငျမှား ဖွဈစရေနျ လူသားမကျြနှာဖုံး စှပျကာ လှညျ့ဖြားနဆေဲ ဖွဈသဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့ အောငျမွငျသှားသညျ ဆိုလြှငျ ပငျ တိုငျးပွညျသညျ ဖုတျလှိုကျ ဖုတျလှိုကျ ဘဝနှငျ့ စခနျးသှားကွရပတေော့မညျ။
အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ အစိုးရ ငါးနှဈတာ ကွိုးပမျးခဲ့သော တညျဆောကျ ပွုပွငျခဲ့မှုမြား ရစေုံမြောပတေော့မညျ၊ မငျးဘဏ်ဍာ ကိုယျ့ဟာမှတျကာ ခိုးဆိုး လုယကျ အကငျြ့ ပကျြမှုမြားလညျး တစခနျး ထလာပဦေးမညျ။ဤသညျတို့ကို ၎င်းငျးတို့မြား နိုငျသှားလြှငျ ဆိုလြှငျ ကွောငျ့ကြ နသေူမြား သဘောပေါကျရနျလိုသညျ။လကျရှိ အနအေထားတှငျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီ မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ အဖှဲ့သညျ တိုငျးပွညျကို တိုးတကျအောငျ လုပျနိုငျစှမျး ရှိသူမြား ဟုတျမဟုတျ အရငျ မေးခှနျးထုတျသငျ့သညျ။မဟုတျဟု ယူဆပါလြှကျ ၎င်းငျးတို့အား တနညျးမဟုတျ တနညျး ထောကျခံနမေညျဆိုလြှငျ တိုငျးပွညျအပျေါ ကိုယျကြိုးအတှကျ သစ်စာဖေါကျသူမြား အဖွဈ စာရငျးဝငျကွပတေော့မညျ။၎င်းငျးတို့ အဖို့က စဈသားမြားကို လစာပေးနိုငျရနျ လုံးပမျးနရေပွီ ဖွဈသညျ။ ယခုအခါ ဂငျြးသတငျးမြား ပလူပြံနပွေီ ဖွဈသညျ။သို့သျော ဂငျြးသတငျးမြား ဆိုရာတှငျလညျး ပွညျသူမြား စိတျအားတကျစမေညျထကျ အထိတျတလနျ့ ဖွဈစမေညျ့၊ ဆန်ဒပွရာတှငျ မပါဝငျရဲအောငျ ဖွဈစမေညျ့၊ ဖမျးမယျ ဆီးမယျ သတျမယျ ဖွတျမယျ ဟူသော ဂငျြးသတငျးမြားက ပို၍ ပငျ မြားပွားနသေညျ။ထိုသတငျးမြားကို မဖွနျ့ဖွူးကွပါရနျ အလေးအနကျ တိုကျတှနျးလိုသညျ၊ လိုအပျလြှငျ ခေါငျးဆောငျမြားက သတိပေးပါလိမျ့မညျ၊ မိမိတို့ မစဉျးစား မဆငျခွငျဘဲ ပွုမူနမှေုမြားသညျ ဆန်ဒပွသူမြား၏ စိတျဓါတျရေးရာကို လှနျစှာ ထိခိုကျအောငျ ဖွဈစသေညျကို သတိမူကွပါ။ပွညျသူမြားက လူသား မကျြနှာဖုံးစှပျ မြား၏ ကောကျကဈြမှု လှညျ့ဖွားမှုမြား၊ ဆိုကျဝါးမြား အန်တရာယျကို ရငျဆိုငျနရေပွီဖွဈသညျ။(၂) လကျရှိတှငျ မွနျမာ စဈအာဏာသိမျးခေါငျးဆောငျမြားက သမ်မတ ဘိုငျဒငျကို သူအာဏာရယူပွီး ဆယျရကျ အတှငျး ပထမဆုံး အကွိမျ နားရှကျ တံတှေး ဆှတျလိုကျခွငျး ဖွဈသျောလညျး မွနျမာ အရေး နှငျ့ ပတျသကျ၍ စီးပှားရေး ပွနျလညျ ဒဏျခတျ ပိတျဆို့ထားသညျကလှဲ၍ ထူးထူးခွားခွား လှုပျရှားမှု မတှရေ့သေးပေ။ဘိုငျဒငျသညျ ယခု အခြိနျအထိ အရှအေ့ာရှ နှငျ့ ပစိဖိတျရေးရာ လကျထောကျ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး မခနျ့အပျ ရသေးသညျ့အပွငျ မွနျမာပွညျရှိ အမရေိကနျ သံအမတျသညျလညျး ထရနျ့ လကျထကျ က ခနျ့အပျခံခဲ့ရသူ ဖွဈပွီး တာဝနျယူထားသညျမှာ နှဈလ သကျတမျးသာ ရှိနပေသေေးသညျ။
လကျရှိတှငျ အမရေိကနျ၏ USAID မှလညျး ၎င်းငျးတို့ ပေးရနျရှိသော ဒျေါလာ သနျး (၄၀) ကို အဖှဲ့အစညျးတခုခုက အခိုငျအမာ တာဝနျယူပွီး CDM ကို ကူညီရနျ လှဲပွောငျးပေးနိုငျဖို့ စောငျ့ဆိုငျးနသေညျဟု သတငျးမြား ရရှိနသေညျ။ထိုကိစ်စအတှကျ CRPH မှ အမရေိကနျ နှငျ့ တရားဝငျ ဆှေးနှေးဖို့ ပွငျဆငျနသေညျဟု ယူဆရသညျ။အမရေိကနျ နှငျ့ ဗွိတိနျ တို့မှ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ စှဲဆိုထားခကျြမြားကို ပွငျးထနျစှာ ရှုတျခကြွောငျး ကွညောခကျြမြား ထုတျပွနျခဲ့ကွသညျ။အမရေိကနျ ရှိ ပါတီကွီး နှဈရပျမှ အာဏာသိမျး အဖှဲ့ကို ဘကျပေါငျးစုံမှ ဖိအား အမြိုးမြိုး ပေးသှားမညျဟု ပွောဆိုနကွေပွီး အမရေိကနျ နိုငျငံရေး အသိုကျအဝနျး မှ မွနျမာစဈတပျ၏ အကွိမျကွိမျ ကြူးလှနျနသေော လုပျရပျမြား အတှကျ စိတျကုနျလာကွပွီး မွောကျကိုရီယား ပုံစံ ဆကျဆံသှား ရမညျဟု ပွောဆိုလာနကွေသညျ။တရုတျ ပွီးလြှငျ အာဏာသိမျး အဖှဲ့ကို ငှရေေးကွေးရေးအရ အသကျဆကျ နိုငျအောငျ ကူညီနသေညျ့ စင်ျကာပူ နှငျ့ ဂပြနျ အားလညျး သတိပေးလိုကျသညျ။စင်ျကာပူ နှငျ့ ဂပြနျသညျ ယခုအခါ သာမနျ ပွညျသူမြားကို ထိခိုကျလာမညျ၊ ဒကျဒီကွမျးလြှငျ မာမီခြော့မညျ ဟူသော ဆောငျပုဒျအောကျတှငျ ပုနျးကှယျနကွေဆဲ ဖွဈသညျ။အငျဒိုနီရှား နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး မှ မွနျမာတို့၏ အရေး အပျေါ မွုံစိစိ လုပျနသေော အာဆီယံကို တကျကွှစှာ ပါဝငျလာရေး လှုံ့ဆျောနိုငျရနျ ဥက်ကဌ အဖွဈ တာဝနျယူထားသညျ့ ဘရူးနိုငျး သို့ ထှကျခှာသှားပွီ ဖွဈသညျ။ထို့အပွငျ အမရေိကနျ၊ တရုတျ၊ အိန်ဒိယ၊ ဂပြနျ၊ ဩစတေးသြ၊ နှငျ့ ကုလအတှငျးရေးမှူးခြုပျ အထူး သံတမနျမြား နှငျ့ ဆကျသှယျပွောဆိုနသေညျဟု သိရသညျ။အငျဒိုနီရှားသညျ လကျရှိ အာဆီယံ နိုငျငံမြားထဲတှငျ စဈအာဏာ သိမျးမှုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ တုနျ့ပွနျပွောဆိုခဲ့သော တခုတညျးသော နိုငျငံ အဖွဈ ဆကျလကျ ရပျတညျနဆေဲ ဖွဈသညျ။အာဆီယံ နိုငျငံမြားသညျ မွနျမာပွညျတှငျ ကွီးထှားလာနသေော မွို့ပွလူ့အဖှဲ့အစညျးမြား ၏ လှုပျရှားမှုကွီးသညျ ၎င်းငျးတို့ထံ ကူးစကျမလာစရေနျ စိုးရိမျကွောငျ့ကွ ဖွဈလြှကျရှိပွီး ထိုအထဲတှငျ စင်ျကာပူက ထိပျဆုံးမှ ပါဝငျနသေညျ။စင်ျကာပူနိုငျငံအတှငျး မွနျမာ ပွညျသူမြား လုံးဝဆန်ဒမပွနိုငျရနျ နိုငျငံတှငျးမှ နှငျထုတျမညျ အစရှိသညျ့ အမြိုးမြိုး ခွိမျးခွောကျသညျ့ ကွညောခကျြမြား ထုတျပွနျနသေညျ။၎င်းငျးတို့ စိုးရိမျမညျ ဆိုလညျး စိုးရိမျစရာပငျ၊ ယခုပငျ မွနျမာပွညျ၏ လူထုလှုပျရှားမှုကွီးကို “အရှတေ့ောငျ အာရှ နှဦေး တျောလှနျရေး ကွီး” ၏ အစဟု ကငျပှနျးတပျ ရေးသားလာကွပွီ ဖွဈသညျ။အရေးတျော ပုံအောငျရမညျ!!!CRD_Sir Hla Soe Wai
Categories Online News Post navigation
ပတ္တမြား ငမောက်ရဲ့မူလပိုင်ရှင် မိသားစုလေးရဲ့ကြေကွဲဖွယ် အဖြစ်ပျက် များနှင့် မိုးကုတ်မြို့က ဒေါ်နန်းကြည်တောင် သမိုင်း
အမေရိကန်တို့ အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူလေမန်နီကို MQ-9 REAPER ဒရုန်းဖြင့် လုပ်ကြံခဲ့စဉ်က
© 2021 CeleTrend • Built with GeneratePress